Dhiig iyo Cabsi Uur U Dhexeeya Sharka Qofka Cusub 7 4D Shumaca - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Dhiig iyo Cabsi Uur U Dhexeeya Sharka Qofka Cusub 7 4D Shumaca
Dhiig iyo Cabsi Uur U Dhexeeya Sharka Qofka Cusub 7 4D Shumaca
Waxaa qoray Shannon McGrew
Inta badan taageerayaasha naxdinta leh waxay barteen "Sharka Dadka Deggan" xuquuqaha, sidee bay u ahaan waayeen?
Adduunku wuxuu udub dhexaad u ahaa noocyada naxdinta leh tan iyo markii ciyaarta fiidiyowga ay soo baxday 1996 iyo filimka 2002. Iyadoo la rajeynayo kulankooda cusub,"Sharka Dadka Deggan 7: Biohazard", kaas oo daawadayaasha u galiya goobta madadaalada 4D bisha Janaayo 24, hal shirkad ayaa dooneysa inay ku soo rogmadaan dareenkaaga xitaa intaas ka sii badan.
Geek merchandiser Merchoid ayaa sii deyn doona a "Sharka Dadka Deegaanka 7: Dhiig, Dhidid, iyo Cabsi Shumaca 4D VR" iyadoo loo dabaaldegayo qaybtii ugu dambaysay.
Hadday ahaan lahayd gudaha Xumaan Resident kuma filna, abuurayaasha cod-bixiyeyaasha dhiigga leh waxay ugu talagaleen si ay ugu daraan dareenkaaga urta, iyagoo ku siinaya khibrad kor u kacsan, oo ka baxsan muraayadaha indhaha.
Ma hubo in taasi ay tahay wax fiican, laakiin waa inaan qiraa inaan xiisaynayo. Naqshadayaashu waxay cadeeyeen in urta ay noqon doonto mid xasuusinaysa “alwaax duug ah, maqaar, iyo waliba xoogaa dhiig ah” taas oo ah talaabo ka sareysa urta meydadka burbursan.
Maadaama carafta raagtay? Shumacyada waxaa loogu talagalay inay socdaan ugu yaraan 18-20 saacadood waxayna leeyihiin qiimo dhan $ 18.99 oo aan aad u badnayn markii la helayo shumac tayo leh - xitaa haddii ay udub dhexaad u tahay geerida, burburka, iyo undead.
iyada oo loo marayo Merchoid
Waxay umuuqataa in shumacyadu aysan wali iibin websaydhka, laakiin waxaan dareemayaa dareen ah isla marka lagu daro, way iibin doonaan, markaa hubi inaad dib u eegayso Merchoid.
Tani waa shey loo baahan yahay, gaar ahaan haddii aad rabto inaad ku darsato khibradaada ciyaaraha marka aad ciyaareyso "Sharka Dadka Deggan 7: Biohazard".
Aniga ahaan, waan ku faraxsanahay inaan arko shumacyo loo qaabeeyey kadib filimadeena iyo jilayaasha aan aadka u jeclaan jirnay waxaana rajeynayaa inaan sii wado aruurinta shumacyo argagax leh Had iyo jeer waa wada hadal bilow fiican.
update: Shumacyada waxaa lagu iibiyaa Merchoid, laakiin wali waa la heli karaa loo maro Numskull.
shumacyoResident Xun 7
Cherry Pie Midabkiisu yahay 'Mataanaha Fiinta' Vinyl, Ma Wakiilka Cooper Ayaa La Ogolyahay
Cult of Chucky ayaa u imanaya inuu ciyaaro: Shaxan iyo Faahfaahin Dhexdeeda ah!